Heshiisyadii La Saxeexay Maanta, Mustaqbalkii Ousmane Dembele Oo Dhinac U Dhacay Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa Ee Caawa Ay Qoreen Wargeysyada Yurub - GOOL24.NET
Heshiisyadii La Saxeexay Maanta, Mustaqbalkii Ousmane Dembele Oo Dhinac U Dhacay Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa Ee Caawa Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
Ousmane Dembele ayaa ugu dambayntii u muuqda in uu sii joogayo kooxdiisa Barcelona, kaddib markii ay wada-hadleen Xavi Hernandez. Achraf Ben Ayad oo saxaafadda la hadlay ayaa yidhi: “Dembele wuxuu doonayaa in uu sii joogo sababtoo ah tababaraha ayaa doonaya isaga, ciyaartoygu waa ku faraxsan yahay Barcelona, waana la is fahmay.”
Manchester City ayaa xidhiidh la samaysay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Leeds United iyo xulka England ee Kalvin Phillips oo ka mid ah ciyaartoyda uu doonayo Pep Guardiola. Waxay u arkaan beddelka ugu habboon ee ruug-caddaagii ka tegay ee Fernandinho.
Roma ayaa wali ka shaqaynaysa sidii ay ula saxeexan lahayd Davide Frattesi oo khadka dhexe uga ciyaara Sassuolo, kaas oo isaguna doonaya in uu ka hoos ciyaaro Jose Mourinho, laakiin Emilia-Romagna ayaa ku adkaynaya xaaladda oo aan doonayn in uu si fudud ku fasaxo. Roma ayaa Arbacadii la kulantay wakiilka laacibkan si ay u dhamaystirto heshiiskiisa.
Gareth Bale ayaa saaka booqday garoonka tababarka Cardiff City, waxaanay wada-hadallo yeesheen tababare Steve Morison. Warbaahinta Wales ayaa sheegtay in ay suurtogal tahay in laacibkani uu ku biiro kooxdaaskaddib markii uu soo dhamaaday qandaraaskiisii Real Madrid, iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyeyna la sheegayay in ay wakiilladiisu la kulmeen madaxda Cardiff City.
Henrikh Mkhitaryan ayaa galabta tijaabada caafimaadka u maray Inter Milan oo uu si xor ah ugu wareegayo. Waxa uu qalinka ku duugi doonaa heshiis laba sannadood ah oo uu kaga ciyaarayo San Siro Stadium, kaddib markii uu soo dhamaaday qandaraaskiisii Roma.
Garabka weerarka Leeds United iyo xulka Brazil ee Raphinha waxa uu ku faraxsan yahay in uu sugo Barcelona waxaanu iska diiday dhawr dalab oo ay kooxo kale u bandhigeen, laakiin waxa jirta khatar ah in uu samirku ka dhamaan karayo oo uu ka degi karayo naadiyadaas oo ay Arsenal ku jirto.
Wargeyska L’Equipe ayaa xaqiijiyey, in Real Madrid ay ka go’an tahay in ay kula dagaallanto Bayern Munich iyo PSG saxeexa weeraryahanka reer France ee Hugo Ekitike oo u ciyaara Reims. Waxa sidoo kale doonaysa Newcastle United.
RASMI: Bayern Munich ayaa si rasmi ah ula wareegtay xiddiga reer Senegal ee Sadio Mane oo ay ka iibsatay Liverpool, waxaanu qalinka ku duugay heshiis saddex sannadood ah.
Romelu Lukaku ayaa sameeyey qiimo dhimis 30% mushaharkiisa ah, si uu u fududeeyo si uu u fududeeyo in uu ku laabto Inter Milan, waxaanay taasi suurtogelisay in labada kooxood ee Chelsea iyo Inter ay heshiis ka gaadhaan in laacibkani uu dib ugu laabto San Siro.
Leeds United ayaa iska diiday dalab uga yimid Arsenal oo ka doonaysay weeraryahanka reer Brazil ee Raphinha, kaddib markii ay Gunners buuxin weyday shuruuddii ahayd in gaadho qiimaha laacibkan.